धर्म गर्न घर बाट निस्केको मान्छे पाप गरेर घर फ`र्कियो ! -रबि लामिछाने – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/धर्म गर्न घर बाट निस्केको मान्छे पाप गरेर घर फ`र्कियो ! -रबि लामिछाने
धर्म गर्न घर बाट निस्केको मान्छे पाप गरेर घर फ`र्कियो ! -रबि लामिछाने
निषेधा’ज्ञाकै समयमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्न सयौँ’को सं`ख्यामा स्थानीय भेला भएपछि पुल्चोक तनाव’ग्रस्त बनेको छ । प्रहरी र स्थानीय बीच रथ`यात्राका विषयमा वि’वाद हुँदा स्थिति तनाव’ग्रस्त बनेको हो ।भी’ड हटा उन प्रहरीले पा’नीको फोहरा प्र’हार गरेको छ । यसअघि स्थानीयले प्रह’रीमाथि ढु`ङ्गा’मुढा गरेका थिए । आ’क्रोशित भीडले प्रह’रीको गाडीमाथि पनि ढुंगा हानेका छन् ।
लामो समय’देखि थाती रहँदै आएको रातो मच्छिन्द्र नाथको रथलाई निषेधा’ज्ञाकै बीच आज तानिएको हो । मल’मास अगाडिनै मच्छिन्द्रनाथलाई बुंग’मती लानुपर्ने प्रचलनका कारण स्थानीय सयौँको संख्यामा पुल्चोकमा जम्मा भएका थिए ।
कांग्रेसले भन्यो : सलहको क्षति न्युनीकरणका लागि गम्भीर बन
कार्टुनमा भेटिएकी नानीको न्वारन हुँदै : के नाम राखियो त उनको ?
ग्राण्डी अस्पतालका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण